Ithebula Elijwayelekile Limboza Imboni | I-China Standard Table Covers Abenzi nabahlinzeki
Abagijimi Bethebula Eliphrintiwe Ngokwezifiso
Ilungele imicimbi ehlukahlukene yokumaketha, imibukiso yezohwebo, nokwethulwa kwemikhiqizo emisha, umgijimi wethebula langokwezifiso angenza umuzwa ojulile futhi oqinile kubantu "abasendleleni". Amalogo neziqubulo zokuphrinta kumgijimi wetafula, umyalezo wakho obalulekile uzofinyelela kubantu kungakapheli nemizuzu.
Ukumbozwa Kwethebula Eliguqulwayo elingu-8ft
Isembozo setafula esiguqukayo noma esiguquguqukayo silungele imicimbi ehlukahlukene yokumaketha, imibukiso, imibukiso yezohwebo nokuningi. Ngesembozo setafula esihle esiguqukayo, uzothola izixazululo ezimbili ezihlukile zokuphromotha, njengoba itafula lethu liphonsa kungeke kuguqulwe kuphela kusuka ku-8ft cast kuya ku-6ft cast kepha futhi kusuka ku-8ft cast kuya ku-6ft cover.
Ithebula Amakhava nge Open Emuva
Uhlobo lokuphonswa kwetafula noma ikhava yetafula kungenye yezinhlobo zakudala kakhulu eqoqweni lethu lezindwangu zetafula ezisetshenziswa kakhulu emibonisweni yezohwebo, ekubonisweni noma emibonisweni. Idizayini elula nokusika okuhlanzekile kuyenza ithandwe ngabantu abaningi ababonisa imibukiso. Uma ufuna ukubonisa umkhiqizo noma i-logo yakho, izindwangu zetafula eziphrintiwe ngokwezifiso ezi-3 ezinhlangothini zombili nakanjani zikhetha kakhulu.
Okufaka ukwakheka okucacile nokuhlanzekile, ukuphonsa kwetafula ngokwezifiso kungaqokomisa kalula umkhiqizo wakho, ilogo noma umyalezo obalulekile ofuna ukuwudlulisa futhi uwudlulise. Lolu uhlobo lwethu olulula kunazo zonke, kepha oludala kakhulu olusetshenziswa kakhulu embukisweni wezohwebo noma embukisweni.
Amakhava Wetafula Ephrintiwe Ngokwezifiso
Esikhundleni sokubonisa i-logo yakho nemidwebo ngombono ongacacile oshiywe etafuleni uphonsa kude, itafula eliyindilinga lezingxoxo phakathi kwabantu abayi-2 linikeza ukubhekisisa i-logo yakho, futhi ngaleyo ndlela kukhulisa ukubonwa komkhiqizo wakho.
Amatafula Wesikwele Amatafula Wokubonisa Okuzungezayo
Ufuna ukuxhumana eduze namakhasimende akho angaba khona? Mmeme ukuthi azohlala etafuleni eliyindilinga futhi aqale inkulumo yakho emnandi.
Lolu hlobo lwesembozo setafula lesikwele lwenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zakho. Uphawu lwakho lwendwangu yetafula luyabonakala kakhulu olusizayo ukujabulisa amakhasimende akho futhi ngaleyo ndlela kukhulise ukuqashelwa komkhiqizo wakho.